Wadada Hormarinta-Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co., Ltd.
Cinwaanka: 1288 Purui West Road, Soonaha Wangcheng ee Horumarinta Dhaqaalaha iyo Teknolojiyadda, Magaalada Changsha, Gobolka Hunan, Shiinaha
Bishii Nofeembar 2019, shirkaddu waxay sameysay enzyme fure u ah soo-saarka cephalosporin dhexdhexaadka ah 7-ACA-hal-tamar-soo-saarid enzymatic ----- cephalosporin C acylase ayaa si guul leh oo warshadeed loo sameeyay, iibkuna waa la gaadhay.
Bishii Oktoobar 2019, rukhsadaha farsamada ee shirkadda CN105802937A (habka diyaarinta lipase u adkaysata heerkulka sare) iyo CN105802936A (habka diyaarinta phytase heerkulka u adkaysata iyo phytase heerkulka u adkaysata iyo codsiyadooda) ayaa la oggolaaday.
Oktoober 2018, diyaarinta enzymatic ee shirkadda ursodeoxycholic acid waxaa loo liisgareeyay inay tahay mashruuc teknolojiyad sare oo muhiim ah oo ka socda Xafiiska Sayniska iyo Teknolojiyadda ee degmada Wangcheng, Changsha City, waxayna heleen taageero maaliyadeed oo gaar ah.
Bishii Juun 2017, diyaarinta enzymatic ee shirkadda ursodeoxycholic acid ayaa si guul leh loo soo saaray waxaana la sameeyay iskaashi istiraatiijiyadeed oo lala yeesho Changde Yungang Biotechnology Co., Ltd. waxayna xaqiijisay soosaarka iyo iibinta enzymes acid taxane ursodeoxycholic acid.
Bishii Sebtember 2016, soosaarka enzymatic ee shirkadda ee cilmi baarista iyo mashruuca cefprozil anti-antibiyootiga ah ee afka laga helo ayaa lagu guuleystay oo waxaa la gaaray iskaashi farsamo oo lala yeeshay shirkadda liiska ku qoran ee Chongqing Fuan Pharmaceutical. Isla mar ahaantaana, antibiyootigyada sida penicillin acylase, penicillin synthase, iyo deacetylase ayaa warshadeeyey saldhigga wax soo saarka ee Ningxia.
Bishii Agoosto 2016, shirkaddu waxay ka qayb qaadatay xulista mashruucii labaad ee hal-abuurka dhalinyarada iyo ganacsi abuurka ee degmada Wangcheng, Changsha City, waxaana loo xushay inay ka mid noqoto tobanka mashruuc ee ugu sareeya wax soo saarka warshadaha.
Bishii Janaayo 2016, shirkaddu waxay bedeshay cinwaankeedii u diiwaangashanaa aagga horumarinta dhaqaalaha iyo teknolojiyada Changsha Wangcheng, waxayna u bedeshay magaceeda Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co., Ltd. Baaxadda ganacsigu waxay kordhisay waxsoosaarka cuntada iyo waxyaabaha lagu daro cuntada, iyo sidoo kale soo dejinta iyo dhoofinta badeecooyin kala duwan iyo teknolojiyad. Caasimadda isdiiwangeliyay waa 2 milyan yuan.
Bishii Juun 2015, shirkaddu waxay dhammaystirtay cilmi-baarista iyo horumarinta heerkulka sare ee u adkaysata phytase ee quudinta, waxayna xaqiiqsatay warshadeynta saldhigga wax soo saarka ee Ningxia Zhongwei Beautiful Industrial Park.
Bishii Janaayo 4, 2015, Changsha Nanbeiwang Biological Technology Co., Ltd., oo ah ninkii ka horreeyay Nanbeiwang Biological Technology Co., Ltd., waxaa laga aasaasay Yannong Comprehensive Building, Changsha High-tech Zone. Shirkadda ayaa inta badan ku hawlan adeegyada horumarinta bayoolaji, la-talin, adeegyo kala-beddelasho, adeegyada wareejinta; iibka sheyga kiimikada, cilmi baarista iyo horumarka, iwm, oo ay ku jirto magaalo madax ah oo diiwaangashan 1 milyan yuan.